स्वास्थ्य/जीवनशैली – Page 45 – erupse.com
स्वास्थ्य संस्थालाई लाखौंको जग्गा
बागलुङ, ९ भदौ - जिल्लाको अमरभुमी गाविसका स्थानियले स्वास्थ्य चौकीका लागि करिब ७ लाख ६० हजार बराबरको जग्गा निःशुल्क प्रदान गरेका छन । नेपाल सरकारको नयाँ स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गर्न करिब ४ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने प्रावधानसँगै नयाँ स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणका लागि करिब ४ रोपनी ११ आना जग्गा..
म्याग्दीमा बीस वर्षमुनिका आमा धेरै
बुधबार, भदौ ८, २०७३ मा प्रकाशित
सन्तोष गौतम बेनी, ८ भदौ - म्याग्दीका करिब एक चौथाइ गर्भवती महिला २० नपुग्दै आमा बन्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा दुई हजार २८६ जनाले गर्भजाँच गराएकामा ५६८ जना २० वर्षभन्दा कम उमेरका रहेका कार्यालयकी परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम संयोजक लीला गौतमले जानकारी दिइन्..
किन हुन्छ गर्भवती भएको भ्रम ?
फल्स प्रिगनेन्सी एउटा अवस्था हो जहाँ केही महिला आफू गर्भवती भएको भ्रममा बाँच्छन् । अझैपनि कतिपय महिला यस्ता समस्याबाट पीडित हुने गरेको पाइन्छ । उनीहरुमा गर्भवती भएको महिलामा जस्तै परिवर्तन आउँछ । वास्तवमा उनी गर्भवती भने भएकी हुदिनन् । शरीरको हर्मन प्रणालीमा निश्चित परिवर्तन आएमा महिलाहरु आफू..
टाउको दुख्छ ? सचेत हुनुहोस्
डा. प्रवीन श्रेष्ठ कस्तो टाउको दुखिरहेको छ’ भन्ने मानिस हाम्रा वरपर प्रसस्त भेटिन्छन् । सायदै मान्छे होलान् जसको कहिल्यै टाउको नदुखेको होस् । टाउको दुख्नुका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । कुनै कारण सामान्य हुन्छन् त कुनै जटिल । ‘टाउको दुखेको त हो नि’ भनेर लापरबाही कहिल्यै नगर्नु होला । कहिलेकाहीँ..
अल्छि मानिसहरु बढि बुद्धिमान
शनिबार, भदौ ४, २०७३ मा प्रकाशित
यदि तपाइँलाई कुनैपनि काम गर्न निकै अल्छी लाग्छ र कामचोर हुनुहुन्छ भने यो खबर पढेपछि तपाइँको अनुहारमा सायद खुसी छाउनेछ । एक अध्ययनको निष्कर्षलाई मान्ने हो भने शारीरिक परिश्रम गर्न अल्छी मान्ने मानिसहरु तुलनात्मक रुपमा धेरै समझदार तथा बुद्धिमान हुने गर्छन् । त्यसैले तपाइँको कामचोरीपनलाई कसैले..
के हो सेक्स लत ?
मङ्लबार, साउन ३२, २०७३ मा प्रकाशित
के तपाईंंलाई बारम्बार सेक्स गर्न मन लाग्छ ? के कोही महिलालाई देख्नेबित्तिकै उत्तेजना आएको महसुस हुन्छ ? या अश्लील चलचित्र हेर्न मन पर्छ ? यदि यसो हो भने सतर्क हुनुहोस्, तपाईंलाई सेक्स लत लागेको हुन सक्छ । धूमपान, मदिरापान, चिया जस्ताको लतजस्तै यो पनि एक किसिमको लत हो । सेक्स एक प्राकृतिक क्रिया हो । तर,..
स्वास्थ्य बिन्जु खड्का जिका भाइरस रोग भाइरसको कारणले हुने रोग हो । यो एडिस (Aedes) नामक लामखुट्टेबाट सर्दछ । सन् १९४७ मा पहिलोपटक यो युगाण्डामा देखिएको थियो । रिसस (Rhesus) बांदरहरुमा यो रोग प्रथमपटक पाइएको थियो । सन् १९५२ मा युगाण्डामा नै यो मानिसहरुमा देखिएको हो । त्यसै वर्ष तन्जानियामा पनि यो रोग देखा..
रक्तचापमा कमी ल्याउने उपायहरु
उच्च रक्तचाप भएकाहरुलाई आफ्नो रक्तचापमा कसरी कमी ल्याउने भन्ने कुराले पिरोलिरहेको हुन्छ । जसका कारण उनीहरु औषधीको सेवन गर्दछन् । रक्तचाप कम हुने वा बढ्ने यो विषय तपाईंको जीवनयापनसँग सम्बन्धित छ । यदि तपाईंले आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गरेर आफ्नो रक्तचापलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सक्नुहुन्छ भने..
सिघ्र स्खलन रोक्ने उपाय
वीर्य शीघ्र स्लखन हुनु अस्वभाविक होइन । त्यसैले यस्तो स्थितिमा अनावश्यक रूपमा खासै चिन्ता गर्नु आवश्यक छैन । धेरै चिन्ता गर्दा समस्या बढ्न सक्छ । शीघ्र स्खलनको समस्या नियमित रूपमा हुन थाल्यो भने तपाईंले समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ । यो समस्या कम गर्न आफैंले गर्न सकिने केही उपायः १. यौनसम्पर्क..